Sales Representative | DKT International
Modern Choice Experts Co., Ltd. သည် နိုင်ငံတကာတွင် ခေတ်မီသန္ဓေတားဆေးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး လွယ်ကူလက်ခံနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုရရှိစေရန် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံပေါင်း (၂၈)တွင် ဦးဆောင်နေသော DKT International မြန်မာရုံးခွဲနှင့် တွဲဖက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်သော Social Marketing မှတဆင့် Reproductive Health အတွက် ခေတ်မီကျန်းမာရေးနည်းပညာများကို အားပေးလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ခေတ်မီသန္ဓေတားဆေးများကို ဈေးကွက်အတွင်း ကျန်းမာရေးအသိပညာ ဗဟုသုတနှင့် ကိုက်ညီစွာ
MCE မှ ငယ်ရွယ်တက်ကြွပြီး အရောင်းပိုင်းတွင် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိုအပ်နေသော မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့်
ဗဟုသုတရရှိစေရန်နှင့် ခေတ်မီဆေးများနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ ရောင်းချရန်အတွက် အောက်ပါရာထူးဖြင့် အလုပ်လျှောက်လွှာများ လက်ခံနေပါသည်။
Report to: Sales and Distribution Director
Closing Date: until qualified candidate is identified
- မြို့တွင်း၊ မြို့ပြင် နေ့စဉ် အရောင်းထွက်ရမည်။
- မိမိကုန်ပစ္စည်း၊ စာရင်းဇယား၊ ငွေကြေးများကိုပိုင်နိုင်စွာ ထိန်းသိမ်းရမည်။
- Sales and Distribution Director မှချမှတ်ပေးထားသည့် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များအား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
- ချမှတ်ထားသည့် အရောင်းသတ်မှတ်ချက်များအားလည်း ပြည့်မီအောင် ရောင်းချနိုင်ရမည်။
- အခါအားလျှော်စွာ ပြောင်းလဲချမှတ်လို်က်သော လုပ်ငန်းစဉ် နေရာ၊ ဒေသများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
- အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။
- Human Sexuality နှင့် Sexual Health ခေါင်းစဉ်များကို စိတ်ဝင်စားပြီး ဆက်စပ်သည့် ဆေးများ ရောင်းချရန် စိတ်ဝင်စားမှုရှိရမည်။
- ဟာသဥာဏ်ရွှင်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မလိုအပ်သော်လည်း သင်ယူလေ့လာချင်စိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
- တွဲဖက် Sales Representative များနှင့် ၀န်ထမ်းအချင်းချင်း သင့်မြတ်စွာလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
- ကားမောင်းတတ်ရမည်။ (လိုင်စင်သက်တမ်း အနည်းဆုံး (၂) နှစ် ရှိရမည်။)
- ရန်ကုန်မြို့တွင်းလမ်းများ ကျွမ်းကျင်စွာသိရှိ မောင်းနှင်နိုင်ရမည်။
About DKT International Inc. (Myanmar Branch Office): DKT International isaleader in making modern contraceptives more available, accessible and affordable to people in 28 developing countries worldwide. A social-marketing organization, it promotes its brands competitively in Myanmar as part ofaproven sustainability model. However, it also runs donor-funded projects to raise the public’s education level on sexual and reproductive health. Established in 2014, the Myanmar organization is growing and will surpass 50 staff in the coming year, in two regional offices.
Medical Sales Representative (Sittwe) DKSH ( Myanmar ) Ltd. Medical Sales Representative (Bago) DKSH ( Myanmar ) Ltd. Distribution Sales Representative ananda Tele Sales Representative, Healthcare DKSH ( Myanmar ) Ltd. Sales Representative, GTS, Healthcare DKSH ( Myanmar ) Ltd. Sales Representative, RB, HEC (Three Posts) DKSH ( Myanmar ) Ltd. Sales Representative (Modern Trade-Yangon) -URGENT AEAS TRADING Co.,LTD Sales Representative (Yangon + Upper Country) -URGENT AEAS TRADING Co.,LTD Medical Sales Representative, Medical Devices DKSH ( Myanmar ) Ltd. Engine Sales Representative DKSH ( Myanmar ) Ltd. Sales Representative (B To B) Myanmar UNILINK Communication Co.,Ltd. Sales Representative / Executive Bee International Co., Ltd